UN exchange rates data at 23/10/2021 03:58
Zimbabwe dollar to Euro convertion. Zimbabwe dollar price in Euro today on currency exchange market.
1 000 Zimbabwe dollar = 2.67 Euro
The currency exchange rate has an average value per day. Currency exchange in official banks and online banks. This is a reference to the currency exchange rate. 1 Zimbabwe dollar rises by 0 Euro. Zimbabwe dollar goes up. The Zimbabwe dollar rate increased against Euro by 0 hundredths of a percentage point.
Exchange rate Zimbabwe dollar to Euro
A week ago, Zimbabwe dollar could be sold for 0.002684 Euro. Six months ago, Zimbabwe dollar could be sold for 0.00257 Euro. Ten years ago, Zimbabwe dollar can be exchanged for 0 Euro. Over the week, Zimbabwe dollar to Euro exchange rate changed by -0.54%. The change of the exchange rate of Zimbabwe dollar to Euro for a month is 0.71%. 0.31% per year - the change in the exchange rate of Zimbabwe dollar.
Exchange rate Zimbabwe dollar (ZWL) to Euro (EUR) live on Forex exchange market
Currency converter Zimbabwe dollar Euro
Zimbabwe dollar (ZWL) to Euro (EUR)
1 000 Zimbabwe dollar 2.67 Euro
5 000 Zimbabwe dollar 13.35 Euro
10 000 Zimbabwe dollar 26.69 Euro
25 000 Zimbabwe dollar 66.73 Euro
50 000 Zimbabwe dollar 133.47 Euro
100 000 Zimbabwe dollar 266.94 Euro
250 000 Zimbabwe dollar 667.35 Euro
500 000 Zimbabwe dollar 1 334.70 Euro
You can exchange 10 Zimbabwe dollar for 0.026694 Euro. Today, 25 Zimbabwe dollar can be sold for 0.066735 Euro. Today, 0.13 Euro can be sold for 50 Zimbabwe dollar. Currency converter now gives 0.27 Euro for 100 Zimbabwe dollar. Currency converter now for 250 Zimbabwe dollar gives 0.67 Euro. You can exchange 500 Zimbabwe dollar for 1.33 Euro.
Zimbabwe dollar to Euro today at 23 October 2021
19.10.2021 0.002676 8.86 * 10-6 ↑
18.10.2021 0.002668 2.74 * 10-6 ↑
17.10.2021 0.002665 -
16.10.2021 0.002665 3.69 * 10-6 ↑
15.10.2021 0.002661 -3.4 * 10-5 ↓
Zimbabwe dollar to Euro on 19 October 2021 - 0.002676 Euro. Zimbabwe dollar to Euro on 18 October 2021 is equal to 0.002668 Euro. 17 October 2021, 1 Zimbabwe dollar costs 0.002665 Euro. 16 October 2021, 1 Zimbabwe dollar = 0.002665 Euro. The minimum Zimbabwe dollar to Euro rate for the last month was on 15.10.2021.
Zimbabwe dollar to Euro exchange rate history
Zimbabwe dollar and Euro currency symbols and countries